Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogaadeenya Switzerland oo xustay maalinta qaxootiga aduunka
Jaaliyada Ogaadeenya Switzerland oo xustay maalinta qaxootiga aduunka
Posted by wariye5	/ June 19, 2011
Jaaliyada Ogaadeenya switzerland oo kaashaneeysa jaaliyada Soomaaliyeed ee isla wadankan ayaa si wada jir ah uga qeeyb galay shalay 18ka bishan Juun xuska maalinta qaxootiga aduunka oo lagu qabtay stateka Neuchâtel. Jaaliyada Ogaadeenya ayaa goobta ku soo bandhigtay tacadiyada loo geeysto shacabka Ogaadeenya taas oo sababta in dadku bara kacaan ka dibna ku noqdaan qaxooti gudaha iyo dibada Ogaadeenya. Xuska maalinta qaxootiga aduunka oo sanadkiiba mar la qabto ayeey labada jaaliyadood sanadkan si wada jir ah u qabteen maadaama dhibka isirka Soomaaliyeed ku heeysta Afrikada Bari uu ka imanayo halka cadaw kaliya ee ay wada leeyihiin labada shucuub oo ah gumeeysatada itoobiya.
Raashinka, dhaqanka umada Soomaalyeed iyo dhaantooyin goobta lagu soo bandhigay ayeey u bogeen shucuubtii iyo dadka Swiiska u dhashay oo ka soo qeeyb galay xaflada waxaadna arkeeysay dadka oo u riyaaqaya isna ruxaya kolka ey maqlaan dhaantada dhaqanka u leeyihiin umada Ogaadeenya. Mauuliyiinta jaaliyad Soomaalida Ogaadeenya ayaa sheegay in ujeedadu ahayd in calanka Ogaadeenya uu si siman uga ag badado shucuubta kale ee ka soo qaxay wadamadooda is la markaana dhibka uamdeena heeysta goob walba lagu soo bandhigo si qadiyadeenu aanay u noqon mid aan muuqan.
Xubnaha jaaliyada ayaa si muuqata iyo si dadbanba ugu fasiray masuuliyiinta iyo shacabka tirada badnaa ee hadba ku soo leexanay miiska u gaarka ahaa Soomaaliya iyo Ogaadeenyaba nooca uu yahay dhibka itoobiya ku heeyso amada Ogaadeenya.